चीनमा एकै समय देखियो ३ वटा सूर्य, सुन्दर र दूर्लभ दृश्य देखेर वैज्ञानिक पनि आश्चर्यचकित परे....सचेतको लागि शेयर गरौ ।। - Taja Khabar
चीनमा एकै समय देखियो ३ वटा सूर्य, सुन्दर र दूर्लभ दृश्य देखेर वैज्ञानिक पनि आश्चर्यचकित परे….सचेतको लागि शेयर गरौ ।।
एजेन्सी : विज्ञानले चाहे जति नै फड्को मारे पनि प्रकृति र यसको करिश्मा कहिल्यै रोक्न सक्दैन। एकातर्फ विज्ञान र प्रविधि प्रकृतिका हरेक रहस्यका पर्दा उघार्ने कोसिस लागिरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ प्रकृति हरेक पटक थप एक कदम अगाडी बढी यस्ता चमत्कार देखाउँछ कि विज्ञानका सम्पूर्ण तथ्य नै निरर्थक साबित हुन्छ। एक पटक फेरि पनि प्रकृतिले केही यस्तो करिश्मा देखाएको छ जुन देखेर दुनियाँका ठुला-ठुला नामी वैज्ञानिक पनि नतमस्तक भएका छन्। आज हामी चर्चा गर्दै छौं दुर्लभ दृश्यको बारेमा जुन हालै चीनमा देखिएको थियो। चीनमा एकै समय तीन-तीन वटा सूर्य निक्लिएको दुर्लभ र सुन्दर दृश्य देखिएको थियो। जुन देखेर वैज्ञानिक पनि आश्चर्यमा परे।
आज विज्ञानले यति प्रगति गरेको छ कि मानिसहरु पृथ्वी बाहेक दोस्रो ग्रहमा बसोबास गर्ने बारे सोचिरहेका छन्। हरेक दिन नयाँ-नयाँ आविष्कार भईरहेको छ। तर पनि कुनैबेला प्रकृतिले केही यस्तो करिश्मा देखाउँछ जसले प्रकृतिसँग एक खास शक्ति भएको महसुस हुन्छ। चीनमा प्रकृतिले जुन दृश्य देखायो, त्यसले पनि प्रकृतिले यस्तै खास शक्ति भएको आभास दिलाउँछ। किनकी यस बारेमा वैज्ञानिकले अहिलेसम्म केही खुलासा गरेका छैनन्। यो पूर्णतया: रहस्य बनेको छ। जब मानिसले यस्तो दृश्य देखे, तब उनीहरुले विलम्ब नगरी आफ्नो क्यामरामा उक्त दृश्य कैद गरे।
यस दूर्लभ घटनाबारे प्रत्यक्षदर्शीले दिएको बयानअनुसार त्यस समय आकाशमा एकै समय सूर्य जस्तोदेखिने तीन वस्तुबाट चम्किलो किरण आएको बताएका छन्। यद्यपि त्यो सूर्य थियो या प्रकृतिको कुनै करिश्मा यस बारेमा रहस्य बनेको छ। विज्ञानले यसलाई खगोलिय घटनासँग जोडेर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने आम मानिस भने यसलाई प्रकृतिको करिश्मा मानिरहेका छन्।
घरमै बसी बसी यसरी चम्काउनुस बिग्रेको दात [ भिडियो सहित ] शेयर गर्नु होस ।।
यस्तो तरिकाले धान रोपाइ गर्ने कि ? नेपालमा पहिलोपटक मेसिनबाट रोपाइँ गरिँदै
यस्ता पनि प्रेमी जसले आफ्नै गर्लफ्रेण्ड विक्रिमा राखे, करोडौंको बोली लाग्यो
पूर्वमन्त्रीको चुनौतीः मलाई जिम्मा दिनुस्, निर्मलाको हत्यारा पत्ता…
आज, एकै दिन शुक्र र बुध ग्रह तुला राशिमासँगै हुँदै ! यी ६ राशि माथि खस्नेछ दुखै-दुखको…
नेपाल टेलिकमको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट दशैँ अफर : जानकारी नपाएर छुटाउनुभयो की ?
रोगको भकारी मोटोपनाबाट मुक्त : दुई हप्तामा नै सुपर स्लिम बन्न सकिने यो उपाय सबैको लागि सेयर गरौ
#OMG… नायिका रिचा शर्मामाथी सामुहिक बलात्कार !!